हेर्नुहोस् ल'सुन खा'नाले के फा'ईदा हुन्छ ? के स'बधा'नी अप'नाउने ?
लसुन हाम्रो किचनमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ । तरकारीको स्वादर वास्ना बढाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ । यद्यपी लसुनको साइनो स्वादसँग मात्र जोडिएको छैन । खाली पेट लसुन खा’नुको अरु थुप्रै फाइदा छन् । यसले तपाईंलाई विभिन्न स्वा’स्थ्य लाभ प्रदान गर्छ जस्तै र’क्त’चापलाई कम गर्नु, कोले’स्ट्रोलको स्तर’लाई घटाउनु, कार्डि’योभा’स्कुलर स्वा’स्थ्यमा सुधार गर्नु र क्या’न्सर’लाई रोक्न सहयोग गर्नु । लसुनलाई औष’धीको रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ ।
लसुनमा भिटा’मिन र मिन’रल्स’युक्त पो’षक प’दार्थ भरपुर मात्रामा हुनछ । यसमा खासगरी भिटा’मिन बि १, बि ६, सी, म्याग’जिन, क्याल्सि’यम र क’पर पाइन्छ । दैनिक लसुन से’वन गर्दा दिनभरका लागि सरीर सु’रक्षित रहन्छ । साथै इन’र्जी पनि मिल्छ ।
कसरी खा’ने ? – संभव भएसम्म लसुन विहानै खानुपर्छ, खाली पेटमा । लसुनलाई काँचो खा’नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनभने पकाइएको लसुनमा औष’धिय गुण एकदमै कम हुन्छ। यसको प्राकृतिक एन्टि’बायोटिक गुण प्राप्त गर्नका लागि खाली पेट से’वन गर्नुपर्छ ।
कोलो’स्टोर घटाउनदेखि उच्च र’क्तचार रोक्नसम्म – आर्यु’वेदमा लसुनलाई जवान रहने औ’षधी मानिन्छ । साथै यसले केहि रो’ग जस्तै पा’यल्स, कब्जि’यत, का’नको दु’खाई, उच्च र’क्त’चाप, अरु’ची मा यो उपयोगी हुन्छ । लसुन एक महत्वपूर्ण एन्टिवा’योटिक पनि हो । खाली पेट लसुन खा’नुको के फाइदा छ त ?
कोले’स्टोर नियन्त्रण गर्न कोले’स्टोर नियन्त्रणका लागि लसुन निकै प्रभा’वकारी मानिन्छ । बिहान खाली पेटमा लसुनको केस्रा से’वन गर्नुपर्छ ।
उच्च रक्त’चाप नियन्त्रण – बिहान खाली पेटमा लसुन से’वन गर्दा र’क्त प्रवाह नियमित हुन्छ । यसले हृ’दयसम्बन्धी सम’स्या हटाउँछ । लसुनले र’क्त न’लीलाई चौडा बनाइदिन्छ, त्यही कारण र’क्त प्रवाह सजिलो हुन्छ । जसलाई उच्च र’क्त’चाप’को समस्या छ, उनीहरुले खाली पेट काँचो लसुन से’वन गर्नुपर्छ । यदि लसुनको स्वा’दमा रुची छैन भने लसुन से’वन गरिसकेपछि एक गिलास दुध से’वन गर्नुपर्छ । चिकि’त्सकको परामर्श अनुसार लसुनको सप्लि’मेन्ट पनि लिन सकिन्छ ।
हृद’यलाई स्व’स्थ्य राख्न – हृदय’लाई स्व’स्थ्य राख्नका लागि लसुन एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसले र’क्त प्रवाहलाई सुचारु गराउँछ, कोले’स्टोर नियन्त्रण गर्न । यहि कारण हृद’यरोग’को भयबाट बचाउँछ । मु’टुलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि दिनहुँ दुई केस्रा काँचो लसुन पिसेर सेवन गरौ ।
रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन – लसुनमा भिटामिन सि, बि-६, म्यानिज र सेलेनियम हुन्छ । यी सबै तत्वले शरीरको रोग प्रति’रोधात्मक क्षमता बढाउँछ । लसुनमा रहने एन्टि’अक्सिडेन्ट र एन्टि’माइक्रो’वियल गुणले शरीरमा रो’ग लाग्न दिदैन ।
फं’गल इन्फे’क्सनको बि’रुद्ध – लसुनमा शक्तिशाली एन्टि’फंगल गुण हुन्छ, जसले दा’द, चि’लाउने लगायतकासँग ल’ड्ने क्षमता राख्छ । यो के’न्डिया नामक इन्फे’क्सनसँग पनि ल’ड्छ । जहाँ इन्फे’क्सन भएको त्यहाँ लसुनको तेल लगाउनुपर्छ । काँचो लसुन नियमित रुपमा से’वन गर्नुपर्छ ।
एल’र्जीसँग लड्न– लसुनमा रहेको एन्टि’भाइरल र एन्टि इन्फ्ले’मेटरी गुणले शरीरमा विभिन्न प्रकारका एलर्जी’सँग ल’ड्न मद्दत गर्छ । एलर्जी’को कारण श्वा’स नली सुन्नि’ने सम’स्यामा समेत लसुन उपयोगी मानिन्छ ।
पेट सम्बन्धी सम’स्यामा – पेट सम्बन्धी सम’स्या हटाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ । यसका साथै लसुनको से’वनले पेटमा रहेको विषा’क्त पदा’र्थ सफा गर्छ ।
दाँ’तको लागि लसुन– यदि दाँ’तको दु’खाईबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, लसुनको एक केस्रा पिसेर दाँ’त दु’खेको स्थानमा लगाउनुपर्छ। केहि समयपछि दु’खाई कम हुन्छ। किनभने लसुनमा एन्टी ब्याक्टे’रियल र दु’खाई कम गर्ने गुण हुन्छ ।
अ’रुची घटाउँछ – यदि खा’नेकुरामा अरुची छ भने त्यसको राम्रो समाधान हो, लसुन । बिहान नियमित रुपमा लसुन प्रयोग गर्नुहोस्, यसले पा’चन यन्त्र ठीक हुन्छ ।
लसुन खा’नुका बेफाइदा
तौल बढ्न सक्छ – यदि तपाईं आफ्नो खा’नामा लसुनको बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ तपाईंले आफ्नो शरिरमा थप क्या’लोरी जोडिरहनु भएको छ । यसले तौल बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
लामो समयसम्म र’गत बग्नु – लसुनले तपाईंको र’क्त न’लीलाई फैलाउने काम गर्नसक्छ । अर्थात्, घा’उ लाग्दा वा शल्य’क्रिया गर्दा तपाईंको र’गत अरुको भन्दा धेरै बग्छ । त्यसकारण घा’उ ठिक नभएसम्म लसुन खा’नबाट ब’च्नुहोस् ।
सा’स गन्हाउँछ – लसुनलाई चम’त्कारिक ज’डी’बुटीको रुपमा मानिन्छ तर यसको अत्य’धिक से’वन तपाईंको सा’समा दु’र्ग’न्ध फैलाउन सक्छ । यहाँसम्म कि यसको सानो टुक्राले पनि तेज ग’न्ध निम्त्याउन सक्छ ।
ग्या’स्ट्रोइन्टे’स्टाइनल ट्र्या’क – लसुनले ग्यास्ट्रो’इन्टेस्टाइनल ट्र्याक’मा ज’लन पैदा गर्नसक्छ । त्यसकारण यदि तपाईंलाई पा’चन सम्बन्धि सम’स्या छ भने लसुनको प्रयोगमा सा’वधानी अपनाउनुहोस् ।
– लसुन से’वन गरेपछि त्यसको सा’इड इ’फेक्ट जस्तै, सुन्नि’ने, पे’ट फु’ल्ने, ग्या’ष्ट्रिक हुने, पेटको ख’राबी हुने, सा’स ग’न्ध आउने हुनसक्छ ।
– यसले र’गत’लाई पातलो बनाउँछ । त्यसैले र’गत पातलो बनाउने औ’षधी से’वन गरिरहेकाहरुले यसको से’वन गर्नुअघि चि’कित्सकको परामर्श लिर्नैपर्छ ।